» Aluta continua! Siya kwisizukulwane sabaholi abasha esikholelwa kubona! | DGMT
Aluta continua! Siya kwisizukulwane sabaholi abasha esikholelwa kubona!
By Senzo Hlophe
Akukuhle ukuvele uqhathanise intsha yango-1976 nesizukulwane sango-2016. Isizukulwane sango-1976 ngokuvamile siye sibukwe njengentshisekelo engefaniswe nabantu abajwayelekile, neyafeza okwakungasoze kwenzeke. Ngeshwa, lolu hlobo lokuqhathanisa luye lusishiye sizizwa singenamandla, singenzi kahle futhi ngamanye amazwi nje, siyintsha engenamsebenzi walutho ngo-2016. Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi zikhonyana izinto ezifanayo esingazithola phakathi kwentsha yango-1976 naleyo yanamuhla.
Ngo-1976 izwe labona abafundi besikole, bengajabulile ngokusetshenziswa kwesiBhunu njengolimi lokufunda nokufundisa ezikoleni zaselokishini. Abafundi babekhathazwa nawukuthi abafundisi babengaqeqeshwanga ukuqala ukusebenzisa le nqubomgomo yolimi entsha, bakuthatha ezandleni zabo ukunqaba lolu hlelo olusha. Ngaphansi kwezimo lapho abazali babo abaningi nababheki base bengasabugqiziqakala ubudlova bukahulumeni wobandlululo obase bubukeka bujwayelekile ngokuhamba kwesikhathi. Intsha yazihlomisa ngezinhlangano eziningana zabo ukuze balwe lo mgomo wolimi lwesiBhunu. Ngenxa yokungabikhona kombono, imboni yezamabhizinisi ayenzanga lutho ukulwa nokuchitheka kwegazi labantu ababengaba ngabaqavile ezweni – kodwa-ke futhi phela nemboni yamabhizinisi yayingalindele lutho olutheni kubafundi abamnyama, yayenelisekile nje ngokubaxhaphaza njengabasebenzi babo ababezobafukuzela lapho sebekhulile bebadala.
Ngo-1976 abantu abasha abazishayanga ndiva zonke izinhlaka zeziphathimandla, lapho sibala ngisho nabazali babo, – bavuka indlobane ngomhla ziyi-16 kuNhlangulana, bakwenza lokhu umshoshaphansi ngoba babazi ukuthi izinhlelo zabo zingase zingagunyazwa noma mhlawumbe zivinjwe nokuvinjwa ngabomthetho, nabaholi kanye nabazali babo. Ngenkathi ngihambele isiqhingi i-Robben Island ngo-2012 omunye wezishoshovu zango-1976 owayesihola kulolu hambo, wasitshela ukuthi emva kwezibhelu lezi abaningi babo bake bazindazinda nje bangayi emakhaya ngoba besaba ukuthethiswa ngabazali babo kanjalo nokujeziswa wumbuso wobandlululo, futhi kokubili lokhu kwakuyoba bucayi kakhulu. Lo mzamo wabo obucayi nokho waba yinzuzo – izibhelu zango-1976 zagqugquzela ingcindezi enkulu evela emhlabeni-jikelele ibhekiswe kuhulumeni wobandlululo kanti lokho kwadlala indima ebalulekile ekulungiseleleni inkundla lapho kwakuzodilikela khona umbuso wobandlululo ekuhambeni kwesikhathi.
Nawo ngokugxila kwezemfundo, umkhankaso we-#FeesMustFall wasiza ukuveza ukuthi yize noma kwase kube nenqubekelaphambili ekuqinisekiseni ukuthi imfundo ephakeme iyafinyeleleka kubo bonke, kuningi okusadingeka kwenzeke ukuze kuqinisekiswe ukufinyeleleka okulinganayo kuwonkewonke. Imali yokufunda emabangeni aphezulu imba eqolo kubafundi abangemhlophe ngebala kulabo abafaneleke ukuya ezikhungweni zemfundo zamabanga aphakeme nalabo abafunda khona njengamanje. Lo mkhankaso owasungulwa isigungu esimele abafundi sase-Wits ngemva kokuzwa izindaba ezazimenyezelwe isigungu esiphezulu sase-Wits ngokwenyuswa kwemali yokufunda nge-10.5%, esikhathini esiyiviki umkhankaso owawuthi #WitsWillFall waqala waba undabizekwayo ezweni lonke usubizwa ngokuthi #FeesMustFall, wesekwe yizinhlangano zabafundi ezikhungweni zemfundo eziningi zezwe.
Ngandlelathile ngokufanayo nezigigaba zango-1976, umkhankaso we-#FeesMustFall uzithole ubhekana nobutha obuvela embusweni wezwe kanye nokuthi abazali bawuhlabe inhlali. Uhulumeni wadedela amaphoyisa ahlomile esebenzisa izindiza ezinophephela emhlane, onogada abazimele ababehlome bezingovolo nokwaholela ekuboshweni kwabafundi abangaphezu kwe-163 e-Wits nje kuphela. Njengoba kwenzeka ngo-1976, umkhakha wamabhizinisi wazithulela nje futhi, sengathi kwakungezekanga lutho olwaludinga ubuholi obuqondile. Ukungabikhona kobuholi bezombusazwe nokuntuleka kwegalelo elakhayo avela kwizikhungo zamabanga aphezulu nezocwaningo kwaba into engakholakali.
Ngakho-ke siyabona ukuthi amaphuzu afana nokwesekwa okungenele okuvela ezinhlakeni omunye abengalindela ukuthi zihlinzeke ngokweseka nokuvikela kwezintshisekelo zabantu abasha, kuhlanganise nokwanda kokukhungatheka, kanye nokuntuleka kwezinkundla zokufaka ithonya ezinqubweni zokwenziwa kwezinqumo, kuyinto ekhona emlandweni wazo zombili lezi zehlakalo (1976 no-2015). Noma kunjalo, njengoba isizukulwane sango-1976 situswa njengamaqhawe, intsha yanamuhla ivame ukusolwa futhi ichazwe ngabezindaba njengenentukuthelo, eyingozi, evilaphayo, engenasineke, edangele nengahlonyiswanga ngalutho.
Noma kunjalo umkhankaso we-#FeesMustFall ukhombisa ukuthi ngokufanayo nentsha yango-1976, intsha yanamuhla empeleni ayiyona engenanhliziyo, edangele noma engahlonyiswanga ngamakhono nolwazi mayelana nobulungiswa emphakathini. Umoya wango-1976 usaphila namanje entsheni yanamuhla – uma bezizwa bengalalelwa ngokwenele futhi bekhungathekile bazozibambela izintambo bagqugquzele abanye. Umbuzo uthi sibeseka kanjani manje ukuqinisekisa ukuthi imizamo yabo, njengaleyo yentsha yesizukulwane sa-1976, ukuze babe negalelo ekwakheni iNingizimu Afrika engcono? Sibasiza kanjani ukuba babe yisizukulwane esilandelayo esizohola ukuthuthuka kweNingizimu Afrika, isizukulwane esisihlinzeka ngobuholi obusha esibudinga kakhulu – ubuholi esingabuncoma sikholelwe kubona – njengoba sikholelwa kulabo bango-1976?
Ake ubuke i-Activate! ukuze ufunde mayelana nohleloxhumano lwabantu abasha abangaphezu kwezi-2 000 abagqugquzela mayelana nokwenziwa kwamacebo amasha emiphakathini yaseNingizimu Afrika. Nazo izinto ezimbalwa ongazenza ukuze usize abantu abasha manje:
Shintsha indlela obabuka ngayo – zama ukuzifaka ezicathulweni zabo isikhashana
Yeseka abantu abasha ukuze bakwazi ukuthola indlela eyiyo ngohlelo lwezemfundo
Yakha amathuba lapho weseka ukuba bathole isipiliyoni somsebenzi
Yiba ngumeluleki komunye wabo
 Umlando weNingizimu Afrika. I-Timeline yezehlakalo Zokuteleka Kwabafundi BeNyuvesi yase-Witswatersrand ngowezi-2015. Itholakala lapha: www.sahistory.org.za